Umatshini wokucoca ulwelo lweplanethi yeMveliso kunye nabathengisi
OK-175A Uhlobo Plane Indlebe Loop Vuvu 1 + 1 Line Line
Umsebenzi ophambili kunye neZinto zoLwakhiwo Lo mgca weMveliso ususa kwinto yokutya ukuya kwinqwelomoya iMask yokugqitywa kwemveliso ngokuzenzekelayo. Uhlobo lwendlebe olungaphandle lwendlebe kunye nohlobo lwendlebe olungaphakathi lwendlebe luzikhethele. Ngeli xesha, ubukhulu babantu abadala i-175 × 95mm kunye nobungakanani babantwana (120-145) × 95mm banokukhethwa. Ubungakanani baseYurophu i-185 × 95mm nayo inokulungiswa. Ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, umatshini wethu wokulawula umatshini we-servo opheleleyo unokufikelela kwiimfuno zobungakanani bemveliso. Imodeli kunye neModeli yobuGcisa beParameter ...
I-OK-175B yohlobo lwePlane yeNdlebe yokuLungisa iMaski 1 + 2 yokuPhakama kwesiPhezulu soMgangatho
Umsebenzi ophambili kunye neZinto zoLwakhiwo Lo mgca weMveliso ususa kwinto yokutya ukuya kwinqwelomoya iMask yokugqitywa kwemveliso ngokuzenzekelayo. Uhlobo lwendlebe olungaphandle lwendlebe kunye nohlobo lwendlebe olungaphakathi lwendlebe luzikhethele. Ngeli xesha, ubukhulu babantu abadala i-175 × 95mm kunye nobungakanani babantwana (120-145) × 95mm banokukhethwa. Ubungakanani baseYurophu i-185 × 95mm nayo inokulungiswa. Ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, umatshini wethu wokulawula umatshini we-servo opheleleyo unokufikelela kwiimfuno zobungakanani bemveliso. Imodeli kunye neModeli yobuGcisa boPhando ...
Kulungile-176 Chwetheza uMatshini weSixhobo sokuFihla iMaski
UkuSebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo Umgca wemveliso ukusuka ekufakweni kokutya ukuya kwimaski yomzimba ugqityiwe ngokuzenzekelayo. Imodeli kunye neParameter yobuGcisa obuPhambili Imodeli ye-OK-176 isantya (ii-pcs / min) 100-150 iiPC / ubuncinci bomatshini (mm) 3500mm (L) X1000mm (W) x1600mm (H) Ubunzima boMatshini (kg) 700kg Ukunikezelwa kwamandla 220V 50Hz Amandla ( KW) 3KW umoya oxineneyo (MPa) 0.6Mpa Mask Ubungakanani obuGqityiweyo (enye) ubungakanani babantu abadala: 175x95mm Ubungakanani babantwana: (120,130,140,145) x95mm
Kulungile-207 Uhlobo Plane Vuvu Indlebe Loop Welding Machine
Umsebenzi ophambili kunye neZinto zoLwakhiwo Lo matshini kukujija i-earloop ngokuzenzekelayo kumzimba womaski womzimba. Umatshini uphela ubhetyebhetye kwaye ulula ekusebenzeni, lelona lihamba phambili kumatshini wokulinganisa imaski yomlingani. Imodeli kunye neParameter yobuGcisa obuPhambili Imodeli ye-OK-207 isantya (ii-pcs / min) 50-60 iiPcs / min Ubungakanani boomatshini (mm) 2700mm (L) X1100mm (W) x1600mm (H) Ubunzima boMatshini (kg) 700kg Ukunikezelwa kwamandla 220V 50Hz Amandla ( KW) 3KW umoya oxineneyo (MPa) 0.6Mpa